Somali - #OWATONNAPROUD
Bisha Noofambar 5, 2019, dadka deegaanka ee Dugsiyada Dad waynaha Owatonna waxaa la waydiin doonaa inay u codeeyaan mustaqbalka Dugsiga Sare ee Owotonna dhexda su’aalaha labbada ah ee doorashada.
Su’aasha 1: Dhis dugsi cusub (1.600 oo arday qaada ku lid ah 1,700 ee codsiga Maayo 2019)
Su’aasha 2: Ujeedo kale u isticmaalka hadda Dugsiga Sare ee Owatonna ee degmadda iyo/ama isticmaalka bulshadda (Su’aasha 2 waxaa laga heli karaaa qoraalka Su’aasha 1)
​Ilaa Maayo, hogaamiyayaasha degmadda waxay dhegaysanayeen bulshadda si loo barto asbaabaha jebitaanka fudud. Maxaa isbeddelay laga bilaabo aftidii Maayo 2019?
Waxa la yareeyay cabbirka iyo kharashka dugsiga sare
Waxa la yareeyay saamaynta cashuurta ee dadka degen
Walaacyada kale ee laga hadlay ee lagu maqlay dhexda kullamada dhegaysiga, xog ururinta iyo rayiga dheeraadka ah.
Dhismaha dugsiga sare ee ugu dhawaan 100 sano jirka ah waxa uu leeyahay baahiyaha joogtada ah iyo dayac tirka kordhaya, badbaadada iyo walaacyada amniga, xadadka cabbirka goobta iyo meelaha waxbarashadda wakhtigeedu dhammaaday. Walaacyadan waxaa la aqoonsaday labbadaba 2015 iyo 2018 Xooga Hawsha Bulshadda ee Xarumaha. Talo bixinta aftida waxay ka hadlayaan walaacyadan.
Waxa aan Isbeddelin
Waxa aan isbeddelin laga bilaabo Maayo 2019 aftidii waa himiladayada si loo xaqiijiyo dhammaan ardayda ku jirta kulliyada, mihnada iyo noloshu inay diyaar tahay. Cilmi baadhista ay dhammaystirtay Cutubka Amniga Bulshadda ee Xarumaha iyo rayiga bulshadda, qorshaha nashqada waxaa ka mid ahaan lahaa:
• Meelaha wax lagu barto oo cusub ay ku jiraan fasalada, shaybaadhada, iyo dukaanada ku qalabaysan teknoolajiga casriga ah si loo taageero waxbarashadda oo loogu socod siiyo ardaydayada qarniga 21naad fursadihiisa.
• Alaab wayn oo amni ah oo ku dhegan xafiiska wayn.
• Meel lagu cunteeyo oo ballaadhan, taas oo sidoo kale laban laabanta sidii aaga guud ee bulshadda.
• Meel masrax ah oo ku lamaanaan doonta qolalka muusiga sida habboon u cabbir wanaagsan.
• ADA iyo Cinwaanka IX cabashada
• Nidaamyada dhismaha casriga ah, ay ku jiraan nidaamyada yareeya tamarta ee qalabka farsamo iyo korontada.
• Meel baabuurta la dhigto oo ku habboon
• Dhismaha loo nashqadeeyay si ay u saamaxdo debecsanaanta isbeddelada mustaqbalka sida teknoolajiga marka uu sii horumaro.
Maxaa Ku jira Cod bixinta?
Su’aasha 1: Goob cusub oo dugsiga sare ah, $104M
• 1,600 arday; 300,624 fuudh labbajibaaran
• 4-Qaybood oo Jimcsiga ah/Horumarinta goobta leh garoon iyo garoomo yaryar
• Marka kharashka mashruucu uu tegayo $126M, $22M deeqaha ay ku tabarucaan shirkaduhu lagu daray deeqaha dhulka waxay yareeyeen wadarka kharashka iyo saamaynta cashuurta ilaa $104M.
Su’aasha 2: Dib u xadidka goobta dugsiga sare ee hadda degmadda mustaqbaleed iyo/ama isticmaalka bulshadda, $8M
• Haddii labbada Su’aasha 1 iyo Su’aasha 2 ay gudubto, bulshaddu waxay ku lug lahaan kartaa qorshaynt anidaamka mustaqbalka dugsiga sare ee hadda wixii ah degmadda iyo/ ama isticmaalka bulshadda. Waxaa jiri kara wadarta $11 milyan oo ku jirta miisaaniyada si loo burburiyo waxa aan in dheeraad ah la isticmaali karin, dib u hagaaji wixii dib loo hagaajin karo oo u horumari goobta degmadda iyo/ama isticmaalka bulshadda.
• Haddii Su’aasha 1 ay gudubto laakiin Su’aasha 2 aanay gudbin, badanka dugsiga sare ee hadda waa la duminayaa sababtoo ah degmaddu ma awoodo inay dayac tirto ama dib u cusboonaysiiso.
• Su’aasha 2 waxay waafaqsan tahay Su’aasha 1, macnaheedu waa Su’aasha 2 waxaa keliya oo la ansixin karaa haddii Su’aasha 1 ay gudubto.
Cod bixintu waxay furmi doonaa 7:00 subaxnimo ilaa 8:00 galabnimo Noofambar 5, 2019. Qofka maqan/codaynta goorta hore ah waxay bilaabantaa Sebtembar 20, 2019 oo waxaa loo samayn karaa qof ahaan xaga Xafiiska Hanti dhowraha Degmadda Steele ee ku yaala 630 Florence Avenue ama addoo ka codsanaya cod bixintaada onlaynka ah xaga www.mnvotes.org.
Wax badan ka ogow oo ku saabsan goobta iyo sida loo codaynayo bogga www.owatonnaproud.org.
Prepared and paid for by Owatonna Public Schools. This publication is not circulated on behalf of any candidate or ballot question.